बाबालाई खुलापत्र :: Setopati
प्रिती शर्मा असोज २४
कोरोना महामारीले उदांग पारेको महिलामाथि भइरहेको हिंसा र छाया महामारीलाई राज्यले गर्ने 'प्रोत्साहन' को नमूना त बेलाबेलामा सामाजिक सञ्जालमा आइरहने 'विज्ञ' हरूको टिप्पणी र तुक्का नै काफी छ।
म 'अछुतै' भए पनि आमा त हुनुहुन्थ्यो मसँग। छाती बढ्दै जाँदा ठाडो भएर नहिँड्, छाती ढाकेर हिँड्, धेरै उत्ताउली नबन्, अब ठूली भइस्, बाबा र भाइसँग नचल भनेर बारम्बार झक्झकाइ रहन उहाँ सधैं साथ हुनुहुन्थ्यो।
आफैंले जन्माएको छोरासँग साथी भएर बोल्दा छोरो बिग्रन्छ, छाडा हुन्छ भनेर वाक्यैपिच्छे उसलाई मर्द हुनुको 'प्रोटोकल' सिकाउँदै गर्दा तपाईंले उभित्रको मानवतालाई कतै मार्दै त हुनुहुन्न? एकपल्ट सोच्नु त बाबा।
पक्कै भाइले भोगेभन्दा बढी पीडा भोग्नुभयो तपाईंले। शारीरिक परिवर्तनसँगै पहिलो पल्ट स्खलन हुँदा पक्कै झस्किनुभयो होला। डराउनुभयो होला। पक्कै पनि 'के भयो, कसलाई भनौं' भन्ने अन्यौलमा एक विश्वासिलो साथ चाहिएको थियो होला।
यो असामान्य समय, अनिश्चितता र किशोरावस्थाको कौतुहलता मेटाउन ऊ प्रविधिसँग नजिक छ। तपाईंले र हामी कसैले सिकाउन नसकेको पाठ उसले जसरी पनि सिक्छ। तर मलाई डर छ यो भर्चुअल पाठ हामीबीच सदाको लागि 'सोसल डिस्ट्यान्सिङ' नबनोस्। बस् उसले सिकेको पाठले उसलाई अपराधी नबनाओस्।
'हरे, कस्ता संस्कार दिएका तिनका बाउआमाले' भनेर अरूको कोख धुत्कारेर पानीमाथिको ओभानो हुनु भन्दा वा 'जे हुनु भैगयो, अब मिलापत्र गरौं' भनेर खुट्टामा केही पैसा राखेर ढोग्न लाउनुभन्दा वा 'मरो यस्तो सन्तान हुनुभन्दा नभएकै बेस्' भन्ने परिस्थिति आउनुभन्दा पहिल्यै संस्कारको नाममा आफूले गर्ने व्यवहार एकपल्ट नियाल्न अनुरोध गर्छु बाबा।
शरीरलाई त मन-मस्तिष्कले डोर्‍याउने हो। मस्तिष्क नै संकीर्ण भयो भने, मन र आत्मबल नै कमजोर भयो भने, शरीर कसरी स्वस्थ र स्फूर्त हुन्छ? सम्बन्ध कसरी सुमधुर हुन्छ? संस्कार कसरी पवित्र हुन्छ? समाज कसरी सुदृढ हुन्छ? एक पल्ट सोच्नुस् त बाबा...
भन्नुपर्ने त अझै छ, बाँकी कुरा भेटमा...